Toamasina : Olona fito saron’ny Polisy teo ampanomanana fanafihana mitam-piadiana mahery vaika
mercredi, 29 août 2018 22:23
Raha ny fanazavana nomen’i Kaomisera Rakotovao Jean Christian, mitantanana ny kaomisaria ao Tanambao II, dia fiaraha-miasa matotra teo amin’ny Polisy sy ny Fokonolona no nahafahan’izy ireo nanao vela-pandrika nahazoana izao vokatra izao.
Teo ampanomanana fanafihana mitam-piadiana mahery vaika eto Toamasina izy fito no izao voasambotra izao, ka tovolahy ny dimy, izay telo tratra tao anaty Bungalow niaraka tamin’ireo basy kalaky, nisy bala folo tao anatiny, ny roa kosa nandritra ny fisavana ny trano ka tratra tamin’izy roa lahy koa ilay moto Scooter fampiasan’izy ireo amin’ny fanafihana mitam-piadiana fanaon’izy ireo eto Tamasina.
Ireo vehivavy roa kosa dia tratra tao Ankirihiry ny iray, niaraka tamina tranom-bala efatra tamin’ireo tranom-bala dimy sarona, ny vehivavy faharoa kosa dia tratra tao Tanambao V, izay voalaza fa mpanao ny irakiraka mpitondra ny basy mandritra ny fanafihana mitam-piadiana fanaon’izy ireo.
Basy mahery vaika fampiasan’ny mpitandro ny filaminana izy ireto, indrindra ilay basy kalaky afaka milefitra sy ireo bala ary tranom-bala tratra.
Mitaky ny fanadihadiana lalina mikasika ny toby na vondron-kery na olombelona namoaka ireo ny vahoaka izay miaritra ny mafy lava amin’ny afitsoky ny fikambanan-jiolahy mampiasa azy ireny eny am-pelan-tanany.